Allgedo.com » Madaxweyne Dowladda kmg Shariif Shekh Axmed oo gaaray magaaladda Addis Ababa iyo shir deg deg ah oo ka dhici doona Addis Ababa.
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu maanta gaaray magaaladda Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya uu ka qeyb gelli doono shir deg deg ah oo ka dhici doona.
Madaxweynaha Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminaayo, ayaa waxay goor dhaw ay ka daggeen magaaladda Addis Abba ee dalka Itoobiya.
Sababaha uu Madaxweyne Shariif uu u aaday magaaladda Addis Ababa, ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo shir deg deg ah ay yeellan doonaan Madaxda Dalalka ku bahoobay Urur Goboleedka Igad.
Madaxda Urur Goboleedka Igad ayaa waxay ka hadli doonaan Ciidamadda Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ee gudaha u gallay dalka Somaliya iyo sidii ay uga mid-noqon lahaayeen Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom.
Igad ayaa waxay soo saari doontaa qaraar qeexaaya in Ciidamadda Dowladaha Itoobiya iyo Kenya loogu ogolaado inay ka mid noqdaan Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom, oo hawl-galla ka wada caasimadda.
Qaraarka ka soo baxa shirka ay yeellan doonaan Madaxda Urur Goboleedka Igad, ayaa waxay hordhigi doonaan Ururka Midowga Afrika, si uu u ansaxiyo qaraarka ay soo saareyn, oo Ciidamadda Itoobiya iyo Kenya looga mid-dhigaayo Ciidamadda Amisom.
Si kastaba ha-ahaatee Ciidamadda Dowladaha Kenya iyo Itoobiya, ayaa waxay iminka ay si toos ah ugu wada sugan yihiin Gobolada Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe “Jubbooyinka”, Hiiraan iyo Galgaduud, waxayna qorsheynayaan inay dagaalo xoogan la-gallaan Xoogaga Shabaab.